USB thief လေးသုံးပြီး ကိုသိချင်တဲ့ computer က password တွေအကုန်ယူမယ် | HARRIS
အသံထွက်ပါသော English to Myanmar Dictionary (191 MB)
English To Myanmar အဘိဓာန် အသံထွက် Software လေးတောင်းဆိုထားတဲ့ အစ်ကိုအတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်..Software ကို Winrar ဖြင့်ချုံ့ထားသည့်အတွက် 1...
Phone Hacking Collection Part  (Myanmar Version) EBook
minsoeyarsar ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Hacking နည်းပညာ အတွေးအခေါ် တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်အပိုင်း ( 1 ) ဖြစ်ပါတယ်..တကယ်စိတ်ဝင်စားရင်လေ့...
Adobe Illustrator ၏ အဓိကသော့ချက်များ
အဓိကထားပြောချင်တာကတော့ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်သူဟာ photoshop တစ်ခုတည်းကို လက်ကိုင်ထားထားလို့မရပါဘူး။ တစ်ခြား photoshop ကနေ ခဏတာနဲ့ဖန်တီ...
inFlow Inventory Premium 2.5.1 Full Version(451 MB)
စတိုးဆိုင်ကြီးတွေ..ဟိုတယ်တွေ...စူပါမားကပ်တွေ စတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးSoftware ဖြစ်ပါတယ်.Link သေသ...
Basic Bat File Programming Ebook ( Myanmar Version )
Bat Pr ogramming ဆိုတာ DOS Command နဲ့ ဆက်နွယ်နေတာပါ...Bat Program တစ်ခုနဲ့ ကွန်ပျူတာတစ် ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်သလို...တိုက်ခိုက...
Java programming အကြောင်း လေ့လာနေတဲ့သူများအတွက် Teach Yourself Java
java အကြောင်း လေ့လာနေတဲ့ programmer များအတွက် အထောက်အကူ ရစေရန် အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အရင်က စာအုပ်က လင့်ပျက်သွားပြီ ထင်တာရယ်. မပြည့်စုံဘ...
muzhiwan for PC (to visible apk icon on PC)
ဒါလေးကတော့ apk icon တွေကို PC ပေါ်မှာ မြင်စေမယ့်ဆော့ဝဲလ်လေးပါ… PC မှာ install လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ....လိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်း...
Matlab အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို) စာအုပ်များ
စာအုပ် နှစ်အုပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . နှစ်အုပ်စလုံး မြန်မာလို ရေးထားတာပါ . Using MatLAB and Simulink ဦးအောင်မြင့် (မြန်မာလို) Download ifile.i...
Adobe Acrobat XI Pro 11.0.3 Full
Adobe Acrobat XI Pro 11.0.3 တွေ့လာလို့ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. စုစုပေါင်း (729 MB) ကို6ဖိုင်ခွဲတင်ထ...
English မှ Myanmar သို့ စကားစုအတိုင်းပြောင်းပေးမယ့် Windows Myanmar Translator v1.0
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာကို စကားစုအတိုင်း ဘာသာပြန် ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးကလည်း အခြား Dictionary တွေထက် ပိုပြီးမကောင်း...
USB thief လေးသုံးပြီး ကိုသိချင်တဲ့ computer က password တွေအကုန်ယူမယ်
By Nyi Aung - -
အားစိုက်ထုတ်စရာ မလိုပဲ သူများရဲ့ security တွေလိုချင်သူတွေအတွက် တော်တော်ကို မိုက်ပါတယ်။ USB thief တဲ့.USB(flash drive) ကို ကွန်ပျူတာမှာ ထိုးလိုက်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ windows user password, Internet History တွေ Videoကြည့်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေ၊ အများကြီးဗျာ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းတွေအားလုံး USB drive ထဲ ပါလာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမှာပါနော်။ အသေးစိတ်ပြောပြပါ့မယ်
အောက်က ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ Windows XP , Vista နှစ်ခုစလုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Download USB thief
rarဖိုင်နဲ့ပါ ။ ဇစ်ဖြည်လိုက်ရင် USB thief ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲမှာ Folder သုံးခုနဲ့ file နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၅ ခုလုံးကို မိမိရဲ့ Flash drive ထဲ ကူးထည့်လိုက်ပါ။ ဘာဖိုဒါထဲမှ ထပ်မထည့်ပါနဲ့။ (ဥပမာ – မိမိကွန်ပျူတာ မှာflash drive တပ်လိုက်ရင် Drive J:\_ အဖြစ်ပြတယ် ဆိုပါစို့။ Drive J:\_ ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဖိုင် ၅ ခုလုံး မြင်ရပါမယ်။ ကလေးပါ နားလည်အောင် ပြောလိုက်တာပါ) ပြီးရင် ဖိုင် ၅ ခုလုံးကို Hidden ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ (မပေးထားလည်းရပါတယ်)
ကူးပြီးရင် USB drive ကို ဖြုတ် ။ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ သွားထိုးကြည့်ပါ။ (မိမိကွန်ပျူတာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့) အောက်ပါအတိုင်း ပေါ်လာပါတယ်။ ( Autorun မပိတ်ထားဘူး ဆိုရင်ပေါ့)
ကျနော် အခုပြထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း Ok ပေးလိုက်ရုံနဲ့ မိမိရဲ့ Windows user password က စလို့ ကွန်ပျူတာသုံးနေတဲ့ History တော်တော်များများ ပါသွားပါပြီ။ ဘာတွေပါသွားလဲ သိချင်ရင် Dump ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလို USB ထိုးခဲ့သမျှ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ Computer name နဲ့ ဖိုဒါ မြင်ရပါမယ်။ (ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ဖိုဒါတစ်ခု နဲ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ကျနော် ကွန်ပျူတာ သုံးလုံးမှာ ထိုးခဲ့တာပါ)
Networkpasswords ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် windows user passwords ကို မြင်ရပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်လေ့လာလိုက်နော်။ ဖိုင် ၅ ခုလုံးကို Hidden ပေးထား လိုက်ရင်။ ဒါတွေ ရှိနေတာ ဘယ်သူမှ မသိတော့ပါဘူး။ တော်တော်များများက Hidden files တွေကို Show မပေးထားကြဘူးလေHacking ၀ါသနာပါတဲ့ Beginner တွေ အတွက်ပါ။
Labels: Window Tutorials
Temp+CPU PRO V 3.95 For Android
PDF Reader Pro - qPDF Notes V 3.1.2 For Android
GoVideo player v 2.1.1 For Android
Basic Bat File Programming Ebook ( Myanmar Version...
USB thief လေးသုံးပြီး ကိုသိချင်တဲ့ computer က pass...
Adobe CS6 All Products Activator x86/x64
SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 [N5100] v4.1.2 ကို Root လု...
Galaxy S3 Mini [I8190 /N /L] version v4.1.1 and 4....
Windows 8 Start Button Insatller For Window 8 User...
IOS Gameတွေ ကို Hack မယ်
Ace Translator 10.5.3.861 (ဘာသာစကား 65 မျိုးကို မှ...
Avira System SpeedUp 1.2.1.8300 Full
Commview Wifi Hacker v6.0.581 (+ Hacking Instructi...
Hitman Pro 3.7.5.199 Full
Serial Numbers For Adobe Photoshop CS5
YouTube Downloader Pro YTD 4.0 Full Version ( 10 M...
Copyright © 2013-2014 | All Rights Reserved - About US | Disclaimer | Support | Contact US - Designed By: TemplatePixel - Published By Gooyaabi Templates